प्रतिशको आक्रामक अन्त्यमा बागमती विजयी | Hamro Khelkud
प्रतिशको आक्रामक अन्त्यमा बागमती विजयी
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – तीव्र गतिका बलिङ अलराउन्डर प्रतिश जि.सी. को आक्रामक अन्त्यसँगै बागमती प्रदेशले प्रधानमन्त्री कप टि२० राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रदेश २ माथि ५ विकेटको जित हात पारेको छ ।
१ सय ५६ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको बागमतीले १९.४ ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो । बागमतीको जितमा प्रतिश ७ बलमा ३ छक्कासहित २१ रनमा अविजित रहे । जितको लागि अन्तिम १८ बलमा ३३ रन चाहिँएको थियो । प्रतिश १८ औं ओभरको पहिलो बलमा लक्की कठायत आउट भएपछि क्रिजमा आएका प्रतिशले यसै ओभरमा विवेक यादवलाई चौथो र छैटौं बलमा सानदार छक्काका साथ जिततर्फ अग्रसर बनाएका थिए ।
अन्तिम ६ बलमा ९ रन चाहिँएको अवस्थामा प्रतिशले विवेकलाई पहिलो बलमै छक्का प्रहार गर्दै जित सहज बनाए । प्रतिशले चौथो बलमा एक रन बटुल्दै खेल सकाएका थिए । नन्दन यादव १० बलमा १ चौका र १ छक्कसहित १५ रनमा अविजित रहे ।
ईशान पाण्डे ३१ बलमा २ चौका र १ छक्कासहित ३२ रनमा आउट भए । डेब्यू खेल खेलेका लक्की २६ बलमा ४ चौकासहित २८ रनमा क्याच आउट भए । सुवास खकुरेल २०, आदिल खान ५ र ज्ञानेन्द्र मल्ल २० रनमा आउट भए । प्रदेश २ का जितेन्द्र यादवले सर्वाधिक २ विकेट लिए । प्रथिक यादव, हरिशंकर शाह र विवेक यादवले १–१ विकेट लिए ।
त्यसअघि टियु क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ थालेको प्रदेश २ ले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेट गुमाउदै १ सय ५५ रन बनाएको थियो । ओपनर हरिशंकर शाहले ५४ बलमा ५ चौका र १ छक्कासहित ५६ रनमा अविजित रहे । विवेक यादव १७ बलमा १ चौका र ३ छक्कासहित २८ रनमा आउट भए । सन्तोष कार्की १० रनमा आउट भए । कप्तान हासिम अन्सारी १७ बलमा ३ छक्कासहित २६ रनमा अविजित रहे ।
बागमती प्रदेशका रिजन ढकाल र विपिन आचार्यले २–२ विकेट लिए । प्रतिश जि.सी. र सुवास खत्रीको नाममा १–१ विकेट रह्यो ।
यो जितसँगै बागमतीले सेमिफाइनल सम्भावना बलियो बनाएको छ । समूह बी मा रहेको बागमती ३ खेलमा २ मा जित र १ मा हार सहित दोस्रो स्थानमा छ । शनिबार बागमतीले टियुमा गण्डकीसँग खेल्नेछ । उक्त खेलमा विजयी भएमा बागमती सेमिफाइनलमा पुग्नेछ । समूह बी मा एपिएफ ४ खेलमा ८ अंकका साथ शीर्ष स्थानमा रहँदै सेमिफाइनलमा पुगि सकेको छ ।
मूह ए मा पुलिस ३ खेलमा ६ अंकका साथ शीर्षस्थानमा छ । आर्मी ४ खेलमा २ मा जित र १ मा हार सहित ५ अंकका साथ दोस्रो स्थानमा छ । सुदूरपश्चिम ३ खेलमा १ मा जित र २ म हार सहित २ अंक जोड्दै तेस्रो स्थानमा छ । कर्णाली प्रदेश ४ खेलमा १ मा जित र ३ मा हार सहित २ अंकका साथ चौथो स्थानमा रहेर बाहिरियो । प्रदेश १ ले २ खेलमा १ अंक जोड्दै पुछारमा छ । प्रदेश एक बाँकी दुबै खेलमा विजयी भएमा आर्मीसँग नेटरनरेटमा निर्भर रहनेछ । प्रदेश १ खेलमा पराजित भएमा वा अंक बाँडेपनि आर्मी सेमिफाइनलमा पग्नेछ ।